မြမြအဖြစ် သရုပ်ဆောင်မယ့်သူကို ရွေးချယ်လိုက်ပါပီဗျာ….
Pop Pin New September 1, 2019
မြမြအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါပီဗျာ…ဘယ်သူလဲဆိုတာတော့ ဖတ်သာကြည့်တော့ သင့်ကိုအံ့သြသွားစေရမယ် မြမြအဖြစ် သရုပ်ဆောင်သွားမယ့် သင်ဇာဝင့်ကျော် ဒါရိုက်​တာညိုမင်းလွင်​ပုံ​ဖော်​ရိုက်ကူးမယ့်​” မြ”ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကားကြီးမှာ မြမြအဖြစ်​သရုပ်​​ဆောင်​သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​က သရုပ်​​ဆောင်​သွားမှာဖြစ်​တယ်​လို့ ဒါရိုက်​တာညိုမင်းလွင်​က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “မြ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာဆိုရင်​ ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်ကာလအတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တောင်ဒဂုံမြို့နယ် က မြမြဆိုတဲ့ မိန်းကလေး မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးပုံဖော်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ …
ဝင်းနဲ့ ​ဇော်​အတွက်​ခိုင်​မာတဲ့သက်​​သေရှိ​နေပြီ ထိုင်းအစိုးရသို့ ဒီဂစ်တာသမားဘယ်မှာလဲ. သွေးစွန်းနေတဲ့ဂစ်တာရယ် လက်က ဒဏ်ရာရယ်ကြည့်ရင်သိပြီသူကိုဘာလို့လွတ်ပေးလိုက်တာလဲ. မင်းတို့လိမ်စဉ်အားလုံးငါတို့တွေအကုန်သိနေတယ်.အရှက်သိက္ခာမရှိတော့ဘူးလားမင်းတို့နိုင်ငံသိက္ခာကျမှာကြောက်လို့ငါတို့နိုင်ငံသားကိုထိုးကြွေးလိုက်တာလဲ အားလုံးသိနေတယ်.မင်းတို့ပိုလိမ်လေ မင်းတို့သိက္ခာပိုကျလေဘဲ.သူဘယ်မှာ​နေလဲသူနိုင်ငံတော့​မေ့နေပြီး-လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်​နေ့မနက်ကျွန်းကနေခွာပြီးဘန်ကောက်မှတစ်​ဆင့်သူနိုင်ငံကိုတန်းပြေးတယ် ထိုင်းရဲတွေအမှုစစ်နေတဲ့တစ်​လျှောက်လုံးကသက်သေ​နေရာမှာဒီလူကိုဖျောက်ထားတယ်သူ့နိုင်ငံအစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးသက်သေထွက်ခိုင်းရင်အဖြေပေါ် ပြီ သူက အဓိကသက်သေ. များများShare​ပေးပါ ခင်​ဗျာ သူ့လက်က ဒဏ်ရာနဲ့သွေးစွန်းနေတဲ့ဂစ်တာ.ကသက်သေ.လို​​ပြော​နေကြတယ်​.ဒီပုံတွေမှာအဖြေရှိတယ်.လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုက ဝင်းနဲ့ဇော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ..လူသတ်မှုဖြစ်ပြီးမနက်အစောကြီးသွေးစွန်းနေတဲ့ဂစ်တာသမား သူလက်က ထိုးသွင်းဒဏ်ရာနဲ့သေသူရဲ့ဦးခေါင်းပိုင်းက ထိုးသွင်းဒဏ်ရာက တူနေတယ်.အဲလူကိုလွယ်လွယ်ကူကူဘဲကျွန်းကနေထွက်ပြေးခိုင်းပြီးဘန်ကောက်လေဆိပ်ကနေတန်းပြေးတာဘဲ..သူက အဓိကသက်သေဘဲ..ဒါကိုအမှုဖြစ်စဉ်တစ်​လျှောက်လုံး သက်သေခေါ်စစ်တဲ့ထဲမှာဒီလူကိုဖျောက်ထားတယ်..အမှန်တရားကသိပေမယ့်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး..ထိုင်းနိုင်ငံက လူသတ်မှုမှုခင်းဆရာဝန်မတောင်လက်မခံဘူးပြောတယ်… များများ Share​ပေးပါခင်​ဗျာ.ထိုင်းနိုင်​ငံကတော.သူနိုင်ငံရဲ့သိပ်က္ခာကိုကျုပ်တို့မြန်မာ၂ ယောက်နဲ့ထိုးကျွေးလိုက်တာဘဲ.. …
အိန္ဒိယနိုင်​ငံ​မြောက်​ပိုင်း၊ Malappuram ​ဒေသက အသက်​ ၁၂ နှစ်​အရွယ်​ ​ကျောင်းသူ​လေးတဦးဟာ ​ကျောင်းဆရာဖြစ်​သူရဲ့သားမယားပြုကျင့်​ခြင်းကို ခံလိုက်​ရပြီး ကိုယ်​ဝန်​ရရှိသွားခဲ့တဲ့ အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်​​​လို့ India သတင်းဝက်​ဘ်​ဆိုက်​မှာ ​ဖော်​ပြပါရှိခဲ့ပါတယ်​။ ရဲဌာရဲ့အဆိုအရ ​ကျောင်းဆရာဖြစ်​သူဟာ ထွက်​​ပြေးတိမ်း​ရှောင်​​​နေတယ်​လို့ သိရပြီး ​ကျောင်းသူက​လေးငယ်​​လေးဟာ ဆရာဖြစ်​သူရဲ့ ၂ လဝန်းကျင်​ခန့်​ အဓမ္မပြုကျင့်ပြီး လိင်​ပိုင်း​ဆိုင်​ရာ​စော်​ကားခဲ့ခြင်းကို မိဘ​နဲ့မိသားစုထံ အသိ​ပေးဖွင့်​မ​ပြောဘဲ​ရေငုံနှုတ်​ပိတ်​​နေခဲ့တယ်​လို့ India သတင်းက​ဖော်​ပြ​သွားခဲ့သလို ​ဆေးရုံမှာ …
(၇)ကြိမ်မြောက် “သိန်း ၁၅၀၀၀ ကံထူးရှင်”
(၇)ကြိမ်မြောက် “သိန်း ၁၅၀၀၀ ကံထူးရှင်” ကိုယ်မပေါက်ပေမယ့်လဲ ကိုယ်ပေါက်သလို ၀မ်းသာမိပါတယ်….နောက်တစ်ပါတ်တွေမှာလဲ မပေါက်ဖူးသေးတဲ့သူတွေ ပေါက်နိုင်ကြပါစေ….. ကျုပ်လဲတစ်ခါလောက်တော့ ပေါက်ဖူးချင်လိုက်တာ… ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာလ(၁) ရက်နေ့တွင် ထွက်ရှိသော (၇)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်း တစ်သာင်းခွဲ ဆုကြီးကို (ဆ ၁၉၃၉၉၇ ) ဖြင့် မော်လမြိုင်မြို့နယ် ငန်းတေးရပ်ကွက်နေ ဦးကျော်မျိုးဝင်း ဆွတ်ခူးသွားကြောင်း သိရပါသည်။ …
ကြည့်မိသူတိုင်းမျက်ရည်ကျလောက်စေတဲ့ဆရာ ဆရာမတွေရဲ့မေတ္တာဖော်ကျူးပြသခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလေးရဲ့ (ဗွီဒီယိုဖိုင်)
ကြည့်မိသူတိုင်းမျက်ရည်ကျလောက်စေတဲ့ဆရာ ဆရာမတွေရဲ့မေတ္တာဖော်ကျူးပြသခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလေးရဲ့ (ဗွီဒီယိုဖိုင်) ကြည့်မိသူတိုင်းမျက်ရည်ကျလောက်စေတဲ့ဆရာ ဆရာမတွေရဲ့မေတ္တာဖော်ကျူးပြသခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလေးရဲ့ (ဗွီဒီယိုဖိုင်)1 ကြည့်မိသူတိုင်းမျက်ရည်ကျလောက်စေတဲ့ဆရာ ဆရာမတွေရဲ့မေတ္တာဖော်ကျူးပြသခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလေးရဲ့ (ဗွီဒီယိုဖိုင်)2 ကြည့်မိသူတိုင်းမျက်ရည်ကျလောက်စေတဲ့ဆရာ ဆရာမတွေရဲ့မေတ္တာဖော်ကျူးပြသခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလေးရဲ့ (ဗွီဒီယိုဖိုင်)3 ကြည့်မိသူတိုင်းမျက်ရည်ကျလောက်စေတဲ့ဆရာ ဆရာမတွေရဲ့မေတ္တာဖော်ကျူးပြသခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလေးရဲ့ (ဗွီဒီယိုဖိုင်)4 ကြည့်မိသူတိုင်းမျက်ရည်ကျလောက်စေတဲ့ဆရာ ဆရာမတွေရဲ့မေတ္တာဖော်ကျူးပြသခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလေးရဲ့ (ဗွီဒီယိုဖိုင်)5 ကြည့်မိသူတိုင်းမျက်ရည်ကျလောက်စေတဲ့ဆရာ ဆရာမတွေရဲ့မေတ္တာဖော်ကျူးပြသခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလေးရဲ့ (ဗွီဒီယိုဖိုင်)6 ကြည့်မိသူတိုင်းမျက်ရည်ကျလောက်စေတဲ့ဆရာ …
ထိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးဝက်ဆိုက် ၁၂၀ ကို ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီး ၀င်း နှင့် ဇော်တို့ရဲ့ ပုံနှင့် နိုင်ငံတော် သီချင်းကို တင်ထားခဲ့တဲ့ မြန်မာဟက်ကာအဖွဲ့
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ကော့စမွီခရိုင်၊ လိပ်ကျွန်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူသတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ဇော်လင်းတို့ကို သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်တဲ့အတွက် တရားမျှတမှုနဲ့ အမှန်တရား ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ဆိုပြီး Union of UnderGround Myanmar Hackers အဖွဲ့က ထိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာဝက်ဆိုဒ် ၁၂ဝ ကို ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့ ဒီကနေ့ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့၊ မနက်ပိုင်းက …
အာပုပ်ဆော်နံတာ၊ သွားမှာကျောက်တည်တာနဲ့ သွားချိုး (ဂျိုး) တက်တာတွေကို ပျောက်ကင်းစေမယ့် သဘာဝသွားတိုက်ဆေး
သွားနဲ့ခံတွင်းကျန်းမာရေးက သိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ စကားပြောဆိုဆက်သွယ်ရမှာ ခံတွင်းနံ့မဆိုးဖို့လိုသလို အပြုံးချင်းဖလှယ်ရာမှာ ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်။ဒီအတွက် ဘယ်လိုသွားတိုက်ဆေးတွေ ၀ယ်ယူအသုံးပြုရမလဲလို့ တွေးနေပြီလား။ အဲဒီလို ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်စရာမလိုဘဲ သဘာဝပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ သွားတိုက်ဆေးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း …. အုန်းဆီသန့် စားပဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း …. မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ ဇွန်း ပြုလုပ်နည်း ….. ပါဝင်ပစ္စည်းနှစ်မျိုးလုံးကို သေချာရောမွှေလိုက်ပါ။ ပြီးရင်သွားတိုက်တံပေါ်တင်ပြီး …
အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် (၉)လပိုင်း တစ်လစာ ဟောစာတမ်း
1-9-2019 ရက်နေ့မှ 30-9-2019 ရက်နေ့ထိ အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် တစ်လစာ ဟောစာတမ်း*** စီးပွားရေး*** ဘေးကြပ် နံကြပ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ သိပ်အဆင်ပြေကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အစိုးရက တစ်မျိုး၊ဘေးနားက ဆိုင်က တစ်မျိုး၊ဈေးဝယ်က တစ်မျိုး အမျိုးမျိုးသော ကိစ္စတွေ ကြားမှာ ဘေးကြပ်နံကြပ် ဖြစ်နေမည်။စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နှင့် အလုပ်ကို လုပ်ရမည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုင်ခန်းငှားပြီး ဖွင့်ထားသူတွေလည်း ဆိုင်ရှင်တွေက ပေးတဲ့ဒုက္ခကို …
သူ့ကိုယ်သူဘုရားလောင်းဟုဆိုသူ ( ရှာတွေ့ပြီ ) ရှာတွေ့ပြီ……သူ့ကိုယ်သူဘုရားလောင်းဟုဆိုသည်…….ဒီဘာသာ သာသနာစော်ကားတဲ့မိစ္ဆာအမှိုက်ကိုယ် ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သာသနာရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကို ဘယ်လို လုပ်မှာလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်လျှက်ပါ။ ဒီကောင်တွေ အဓမ္မစကားတွေပြောနေတာကို ဘယ်သူဦးဆောင်ပီးတရားစွဲမလဲ ၂၉၅ သာညိုးနဲ့ စွဲရမလား…..။ ဆရာတော် ဘုရားကြီးတွေကို စော်စော်ကားကား ပြောချင်တိုင်းပြောနေကြတာ နိုင်ငံတော်သမ္မတတွေ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေ နာမည်ခဏ ခဏထည့်ပြောပီး….. ဦးဆောင်ပီး တရားစွဲ မည့်လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခု …
တနင်္လာသားသမီးများအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် (၉)လပိုင်း တစ်လစာ ဟောစာတန်း
1-9-2019 ရက်နေ့မှ 30-9-2019 ရက်နေ့ထိ တနင်္လာသားသမီးများအတွက် တစ်လစာ ဟောစာတမ်း*** စီးပွားရေး*** အလုပ်သစ်ပြောင်းလုပ်တာ ဆိုင်ခန်းနေရာပြောင်းတာ ဒီလ လုံးဝမလုပ်သင့်ပါ။ အဆင်မပြေလို့ ပြောင်းလိုက်ခါမှ ပိုပြီး အဆင်မပြေတဲ့ နေရာ ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေက အထက်အမိန့်ကြောင့် ပြောင်းရမယ်ဆိုလည်း အိမ်က ထွက်တဲ့အချိန် နောက်ကျောနဲ့ထွက်ပါ။တံခါးကို မျက်နှာမှုပြီးမှ ထွက်ပါ။ အလုပ်အကိုင်တွေ အဆင်ပြေမှုအားနည်းမည်။ ယတြာ=ဘုရားဖူးခရီးသွားသော မိတ်ဆွေများကို …